Iziphuphutheki zemvelo: ziyini, izici nezinhlobo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Lapho sikhuluma ngayo yonke iqoqo le- uhlelo lwelanga kufanele singabhekiseli kuphela kumaplanethi kepha nakwi iziphuphutheki zemvelo. Isathelayithi engokwemvelo ingumzimba wasezulwini ongezona owokuzungeza omunye. Imvamisa, ama-satellites mancane ngosayizi womzimba ohlala uzungezile. Lokhu kunyakaza kungenxa yokuheha okwenziwa ngamandla adonsela phansi omzimba omkhulu kulowo omncane. Kuyisizathu sokuthi baqale ukuzungeza ngokuqhubekayo. Kunjalo nangokuzungeza komhlaba maqondana nelanga.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici kanye nokufuna ukwazi kweziphuphutheki zemvelo.
1 Iziphuphutheki zemvelo ohlelweni lwelanga
3 Izinhlobo zeziphuphutheki zemvelo
Iziphuphutheki zemvelo ohlelweni lwelanga
Lapho sikhuluma ngesathelayithi engokwemvelo futhi kuvame ukubizwa ngegama elijwayelekile lezinyanga. Njengoba sibiza isathelayithi yethu ngokuthi inyanga, amanye amasathelayithi amanye amaplanethi abizwa ngegama elifanayo. Isibonelo, kuvame ukuthiwa "izinyanga ze I-Jupiter«. Ngaso sonke isikhathi lapho sisebenzisa igama lenyanga, kubhekiswa kumzimba wasezulwini ohamba uzungeza omunye umzimba ohlelweni lwonozungezilanga, yize kungenza kanjalo emaplanethi amancane kanye nase amaplanethi angaphakathi, the Amaplanethi angaphandle kanye neminye imizimba emincane efana ama-asteroid.
Isimiso sonozungezilanga sakhiwa amaplanethi ayi-8, ama-5 Amaplanethi amancane, izinkanyezi ezinomsila, ama-asteroid futhi okungenani cishe ama-satellites emvelo ayi-146 amaplanethi. Okudume kakhulu kukho konke okwethu okwaziwa njengenyanga. Ukuphela kwesathelayithi emhlabeni. Uma siqala ukuqhathanisa inani leziphuphutheki phakathi kwamaplanethi angaphakathi nangaphandle, sibona umehluko omkhulu. Amaplanethi angaphakathi aneziphuphutheki ezimbalwa kakhulu noma awanawo nhlobo. Ngakolunye uhlangothi, amanye amaplanethi aziwa njengamaplanethi angaphandle aneziphuphutheki eziningana ngenxa yobukhulu bawo obukhulu.
Njengoba wonke la masathelayithi emvelo atholwa kancane kancane, anikwa amagama ahlukile. Iningi lala magama livela ezinganekwaneni zamaGrikhi nezamaRoma. Isibonelo, enye yezinyanga zikaJupiter yaziwa ngokuthi yiCallisto.
Sizohlaziya ukuthi yiziphi izici lezi zindikimba zasezulwini ezinazo. Okokuqala yilokho kumele kube ngumzimba oqinile wasezulwini. Azikho iziphuphutheki zemvelo ezakhiwa ngamagesi njengakwimidondoshiya yegesi. Zonke iziphuphutheki zemvelo zakhiwe ngamatshe aqinile. Into ejwayelekile kunazo zonke ukuthi azinawo umoya wazo. Njengoba incane kakhulu, le mizimba ayinamoya ofanele. Iqiniso lokuba nesimo sezulu lingadala ushintsho oluningi kumandla wesistimu yelanga.
Siyazi ukuthi zikhona cishe ama-satellites emvelo ayi-146 esewonke kusistimu yelanga. Umbuzo ososayensi abavame ukuzibuza wona ukuthi bahlala kanjani ezindleleni zabo futhi bangasondeli noma basondele kakhulu emaplanethi abazungezile. Yilapho sibhekisa kulokhu okungenhla. Lokhu kungenxa yokudonswa amandla adonsela phansi. Futhi ngukuthi, ngenkathi amaplanethi akudala eqala ukukhula nokukhula, bathola insimu yamandla adonsela phansi ekwaziyo ukugcina eminye imizimba isondelene. Amandla adonsela phansi awenzi umzimba wasezulwini asondele komunye, kepha kunalokho abangela ukuthi uzungeze wona.
Lokhu kuyinto efanayo eyenzeka ngeplanethi yethu ezungeze ilanga. Umzimba wasezulwini uzungeza umzimba omkhulu ngenkathi uhamba ngejubane elingaguquguquki. Ukwakhiwa kwesathelayithi yemvelo kungenxa yezinqubo ezahlukahlukene ezenzeka ohlelweni lwelanga. Amanye alawa akhiwa ngamafu kagesi nothuli atholakala azungeze amaplanethi phakathi neminyaka yokuqala yokwakheka kwawo. Iqiniso lokuthi babeseduze kweplanethi lidale amandla adonsela phansi uqobo ukuhlanganisa izinhlayiya ndawonye ukuze zenze isiphuphutheki.
Azilingani zonke. Sithola ezinye zikhulu kunenyanga kanti ezinye zincane kakhulu. Inyanga enkulu kunazo zonke ilinganisa ububanzi obungamakhilomitha angu-5.262 futhi ibizwa ngeGanymede okungokukaJupiter. Njengoba ungalindela, iplanethi enkulu kunazo zonke kuhlelo lwelanga nayo kwakufanele isingathe isathelayithi enkulu kunazo zonke. Uma sihlaziya imizila siyabona ukuthi ijwayelekile noma ayijwayelekile. Akuwona wonke alungisiwe. Ngokuqondene ne-morphology, kwenzeka into efanayo. Kukhona eminye imizimba eyindilinga, kanti eminye inesimo esingajwayelekile. Lokhu kungenxa yenqubo yokwakheka kwayo. Kungenxa futhi yejubane layo. Lezo zidumbu ezakheke ngokushesha zathola ukwakheka okungajwayelekile kunalezo ezakha kancane.
Okufanayo kuya kumjikelezo nesikhathi. Ngokwesibonelo, inyanga ithatha cishe izinsuku ezingama-27 ukuzungeza umhlaba. Kuzakwabo, we UGanymede uqeda ukujika ezinsukwini eziyi-7.16, noma ngabe iplanethi iJupiter inkulu kakhulu kunoMhlaba.
Izinhlobo zeziphuphutheki zemvelo
Ngokuya ngemizila umuntu ngamunye anayo, kunezinhlobo eziningi zama-satellite:
Iziphuphutheki ezijwayelekile zemvelo: Yilezo zidumbu ezizungeza umzimba omkhulu ngomqondo ofanayo wokuthi uzungeza ilanga. Lokho wukuthi, izungeza zinomqondo ofanayo noma ngabe enye inkulu kakhulu kunenye. Njengesibonelo, inyanga ijikeleza isuka empumalanga iye entshonalanga neplanethi yakho yenza okufanayo. Ngakho-ke, iyisathelayithi ejwayelekile ngoba isemzileni oqondile ezungeze umzimba omkhulu.
Iziphuphutheki zemvelo ezingajwayelekile: lapha sibona ukuthi imizila ikude kakhulu namaplanethi abo. Incazelo yalokhu kungenzeka ukuthi ukuqeqeshwa kwabo akwenzelwanga eduze kwabo. Uma kungenjalo ukuthi lawa masathelayithi anga "banjwa" ngamandla adonsela phansi eplanethi ikakhulukazi. Kungase kube khona futhi nemvelaphi echaza ukuba kude kwala maplanethi. Kungukuthi bangaba yizinkanyezi ezinomsila abangena eduze nomjikelezo weplanethi enkulu. Lezi ziphuphutheki ezingajwayelekile zinemijikelezo eyindilinga futhi ethambekele kakhulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngamasathelayithi emvelo kanye nezici zawo eziyinhloko.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Iziphuphutheki zemvelo